Golaha Wadatashiga oo dib u bilaabay wada-hadallo – Maxaa laga arrinsanayaa maanta? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Golaha Wadatashiga oo dib u bilaabay wada-hadallo – Maxaa laga arrinsanayaa maanta?
Golaha Wadatashiga oo dib u bilaabay wada-hadallo – Maxaa laga arrinsanayaa maanta?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Golaha Wadatashiga Qaran ayaa dib u bilaabay wada-hadalladooda, waxaana maanta oo Sabti ah ay sii amba qaadeen shirarkooda looga hadlayo xaaladda dalka, iyada oo uu hoggaaminayo ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya.
BRIT SOMALI TV WAA MAGACA CUSUB EE TV CHANNEL-KA.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Kulane oo berri ku wada biiraya Golaha Shacabka...
Xogta Xilka qaadista Xiirane, Fahad oo Laga Reebay Liiska Labada Aqal,...
Dhinaca wararka suuqa kala iibsiga waxa ka mid ah Arsenal oo...
Doorashada kursigii uu ku fadhiyey MUUDEY iyo kuraas oo lagu qabtay...
Maxey isku qabteen Farmaajo iyo sargaalka Midowga Afrika ee maanta laga...
Xubnihii ku eedeysnaa kiiska Ikraan Tahliil oo dhammaan xildhibaano noqon doona.